မေတာ:ဘက်ဘေလုံ - Meta
ဝီကီမီဒီယာ ဘာသာပြန်များ၏ portal/ကြော်ငြာသင်ပုန်း
ဗက်ဗလုန် သည် မေတာ ဘာသာပြန်ဆိုမှုများ၏ Portal အသိပေးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်သည့် နေရာဖြစ်သည်။ ဘာသာပြန်များနှင့် ပတ်သက်၍ ယေဘူယျဆွေးနွေးချက်များအတွက် ပြောဆိုရေး စာမျက်နှာကိုကြည့်ပါ။
မေတာ အညွှန်းသို့ သွားရန်
CentralNotice – မေတာ ပေါ်မှ ဘာသာပြန်ဆိုထားသော ဝက်ဘ်ဆိုက်တဝှမ်း ကြေညာချက် နဖူးစီးစာသား
ဒေသန္တရပိုင်းဆိုင်ရာ မီဒီယာဝီကီ (အပေါ် translatewiki.net ဆိုဒ်)
မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းအား ၎င်းစာမျက်နှာပေါ်၌ပင် ပြန်လည်ပယ်ဖျက်နိုင်ပါသည်။
လက်ရှိ တက်ကြွစွာ ဆောင်ရွက်နေသော နည်းပညာ ဘာသာပြန်များ စာရင်းထဲ၌ ကိုယ်တိုင်ပါဝင်နိုင်ရေး ထည့်သွင်းလိုက်ပါ။
ဝီကီမီဒီယာ ပရောဂျက်များမှ ဘာသာပြန်ဆိုမှု ကိစ္စရပ်များ
မေတာ-ဝီကီတွင် အပတ်စဉ်အလိုက် ဘာသာပြန်ဆိုခြင်း ပရောဂျက်မှာ ဝီကီပီးဒီးယား တွင် မရှိသေးသည့် ဆောင်းပါးများအား ဘာသာပြန်ဆို၍ ထည့်သွင်းရန် ဖြစ်ပါသည်။
ဘာသာပြန်များအနေဖြင့် မိမိအတွက် ;-) ဖြစ်ပြီဟု မှတ်ယူထားသော အသိနှင့် ဆန့်ကျင်နေသော ကိစ္စရပ်တိုင်းအား ဘာသာပြန်ဆိုရန် မသင့်ပါ။ ထို့ကြောင့် သင့်လျော်သော နာမ်များနှင့် ဒေသိယအမည်များ၏ သတ်ပုံ မှားယွင်းမှုများမှ ရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက် ဝီကီသတ်ပုံအား ဖန်တီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဝီကီသတ်ပုံသည် ဘာသာပြန်-ဝီကီဖြစ်ပြီး ဘာသာစကားစုံ ပရောဂျက်လည်း ဖြစ်ပါသည်။ သင် တတ်ကျွမ်းသော ဘာသာစကားထဲတွင် ဘာသာပြန်ဆိုချက်များအား စစ်ဆေးပြီး ဝီကီသတ်ပုံသို့ ထင်မြင်ယူဆချက် စာတိုများ ပေးပို့ခြင်းဖြင့် ကျေးဇူးပြု၍ ကူညီပေးပါ။ လွပ်လပ်စွာ ပါဝင် ထိတွေ့လိုက်ပါ !
ဘာသာစကားများ၌ စာလုံးအကြီးသုံးစွဲခြင်း နှင့်ပတ်သက်၍ မတူညီသော စည်းမျဉ်းများရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားတွင် လ အမည်များနှင့် အလုပ်အကိုင် အမည် အများစု၏ စာလုံးများသည် အမြဲတမ်းစာလုံးအကြီးများသာ ဖြစ်သော်လည်း ပြင်သစ်ဘာသာတွင်မူ ထိုကဲ့သို့မဟုတ်ပါ။ ဝစ်ရှင်နရီ ပရောဂျက်အများစုတွင် စာလုံးအကြီးများနှင့် စာလုံးအသေးများအကြား ဒွိဟဖြစ်မှုများသည် ယနေ့ခေတ်၌ များစွာဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။ ဘာသာစကားတစ်ခုချင်းစီတိုင်း၏ စာလုံးအကြီးသုံးစွဲမှုနှင့် ပတ်သက်သော စည်းမျဉ်းများအား ဝစ်ရှင်နာရီမှ သိရန်လိုအပ်ပါသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ စာလုံးအကြီးသုံးစွဲမှုဆိုင်ရာ ဇယားကားချပ်အား ပြည်စုံမှုရှိစေရန် ကူညီဖြည့်စွက်ပေးပါ !
Retrieved from "https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Meta:Babylon/my&oldid=23302561"
This page was last edited on 19 May 2022, at 11:19.